Akhriskeyga Xiga: Suuqgeynta Canshuuraha | Martech Zone
Talaado, Maarso 25, 2008 Isniin, Maarso 7, 2016 Douglas Karr
Waxa ku xiga liistada akhriska (oo runtii isu soo ururaya) ayaa ah Suuqgeynta Culeyska.
Dadweynihii wanaagsanaa ee Wiley waxay ii soo direen Buugga Suuqgeynta - waa inay garwaaqsadaan inaan ahay nuugaan buugaag Suuqgeyn ah. Kuwa idinka mid ah ee iska ilaaliya buugaagta ganacsiga sida balaayada laakiin jecel inay bartaan dhaqanka aadanaha… taasi waa waxa aan ka jeclahay buugaagta suuqgeynta.
Qof baa mar i weydiiyay inaan bartay cilmiga bulshada. Waxaan u maleynayaa inaan qabo macno… Waxaan aaminsanahay inay taasi tahay waxa Suuqgeyntu ku saabsan tahay. Ma qiranayo in aan wax badan ka fahmay dabeecadaha aadanaha, laakiin waxaan jeclahay in aan u kuurgalo oo aan la wadaago waxa aan ku fiirsado.
Suuqgeynta Cufis-jireed, Sayniska Soo Jiidashada Macaamiisha, wuxuu leeyahay dabool jilicsan, jibbaaran site, blog jilicsan, iyo sharaxaad quruxsan:
Suuqgeynta Gravitational waxay siisaa ganacsatada, milkiileyaasha ganacsiga, dadka wax iibiya iyo xirfadleyda suuq geynta qaab fudud oo lagu soo jiito macaamiisha isla markaana lagu xiro iibinta iyadoon loo baahnayn inay qabtaan shaqooyinka iibka gacanta sida wicitaanka qabow, raadinta ama tuugsiga ganacsiga.
Buuggan waxaa loo qoray dadka doonaya iibinta, macaashka, macaamiisha iyo lacagta jeebkooda ku jirta laakiin doorbidaya inay sameeyaan iyada oo aan gacanta lagu qaban, buugani wuxuu muujinayaa mabaadi'da si dabiici ah u soo jiidanaysa macaamiisha iyo si fudud oo aan dhib lahayn u iibinaya iyadoon la riixin, in¬your¬face, dhib tabta. Waxay isku daraysaa talooyin wax ku ool ah oo ku saleysan habab la tijaabiyay oo la xaqiijiyay oo leh taariikhooyinka of¬the¬ boholaha, iibka xad dhaafka ah ee silig-la'aanta saafiga ah iyo khibradaha suuqgeynta.
Anigu mid keli ahi ma ihi, laakiin ma ihi ku xukumo buugga jeldigiisa [loogu talagalay]. Xigashooyinka ka imanaya qorayaasha kale waxay u egyihiin sida buuggu u yahay mid qosol badan, oo adag, iyo wejigaaga. Taasi uma eka mid jilicsan sida xayeysiiska… waxay u egtahay buug aan runtii ku raaxeysan doono.
Waxaad kala soo bixi kartaa ah waxa laga soo qaatay Suuq Suuq-garaw bogga qorayaasha. Waxaan kula wadaagi doonaa ra'yigayga ku saabsan buugga toddobaadyo yar gudahood markaan dhammeeyo.
Tags: soo jiidashada macaamiishasuuqgeynta culeyskaJimmy VeeJoel Bauerbuuga suuq geyntaTravis Millerwiley
5PM: Maareynta Mashruuca SaaS oo buuxa
Tani waxay umuuqataa buug weyn. Waxaan jeclaan lahaa inay ii soo diraan nuqul si aan u akhriyo oo aan dib u eego. Waxaan ku dari doonaa liiskayga, kaas oo ku sii kordhaya boodbood iyo xuduud hadda.
Waxaan jeclahay fikradda ah in macaamiil kuu yimaadaan - iyada oo loo marayo culeyska. Taasi waa habka ugu wanaagsan, haddii macaamilku aaminsan yahay inay alaabta rabeen markii hore, ee maahan inaad adigu ku riixday badeecada. Waad ku mahadsantahay madax kor ku xusan buuggan.